यो भाईलाई तपाई के भन्न चाहनु हुन्छ ? - समृद्ध नेपाल
आफनो घर्म अनुसार आआफना भगवान हुन्छ्नहरेक धर्मका आ आफना मुल्य मान्यता हुन्छन धर्म कसैको ठुलो कसैको सानो भन्ने हुदैन । एक धर्म ले अर्को धर्मलाई सम्मान गर्न सिक्नु प्रदछ ।धर्मको नाममा द्वन्द्व मच्चाउनु महा पाप हो आखिर कति दिन होर हाअमि बाच्ने नेपाल बहु जाति बहु सास्किति रितिरिवाज ले भरिपुर्न देशको
यहाका मानिसहरु मिलेर बसेका छ गर्ब लाग्छ नेपालि भएर बस्नु यो माथि भाईले यसरि फोटा खिच्नु गलत हो हस्तो लाग्छ तपाईं को बिचारमा के लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला यो पनि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएका छन् । र उनको राजीनामा पनि स्विकृत भैसकेको छ ।
जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले चार जना सांसदलाई कारबाहीको लागि गरेको सिफारिश अनुसार प्रदेश सभामुखले उनीहरु पदमुक्त भएको जानकारी गराएका थिए । लगत्तै चार जना सांसदलाई पदमुक्त गरेको विषय अवैधानिक भएको यादव पक्षले फर्जी कारबाही गरेको ठाकुर पक्षको आरोप थियो ।
अस्पतालले पिसाब रोकिएकी नानीलाई भर्ना नलिएपछि चाहार्दा-चाहार्दै ज्यान गयो !
रन्जनाकि दिदी रुदै आइन मिडियामा,आमाले रुदै खोलिन भित्री गोप्य रहस्य,सत्य कुरा यस्तो पो रहेछ !
कोरोनाबाट जोगाउन शिक्षिकाले विद्यार्थीलाई मास्क सिलाएर बाँडे !